Nolosha Wasiiro katirsan Xukuumada Soomaaliya oo ku sugan Garoonka Diyaaradaha Kismaayo oo xalay Halis gashay |
Nolosha Wasiiro katirsan Xukuumada Soomaaliya oo ku sugan Garoonka Diyaaradaha Kismaayo oo xalay Halis gashay
Waxaa Habeenimadii xalay Hoobiyayaal lagu garaacay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Kismaayo xili halkaasi ay ku sugnaayeen Wasiiro katirsan Xukuumada Soomaaliya iyo Saraakiil ciidan.
Weerarka Hoobiyaasha ayaa kusoo dhacayay qeybo kamid ah Garoonka Diyaaradaha Kismaayo ,Xilliga weerarka lagu qaaday ayaa waxa ay Wafdiga ku sugnaayeen gudaha Garoonka, waxaana lasoo sheegayaa in qal qal iyo cabsi badan uu xalay ku beermay wasiirada.
Weerarkan Madaafiicda ah ee xalay lagu garaacay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Kismaayo ayaa loo badinayaa in ay ka dambeeyaan Kooxda Al-Shabaab oo aalaaba garoonka kusoo qaada Weeraro Hoobiyaal ah.
Warar aan la hubin ayaa sheegaya in Kooxda Weerarka geysatay ay ahaayeen Maleeshiyadda Axmed Madoobe oo isku muuqaal ekeysiiyay Kooxda Alshabaab, waxaana lagu soo waramaaya in Ciiddamadda Dowladda oo kashanaaya kuwa Kenya ay difaaceen kooxihi weerarka soo qaaday, halka Ciiddamadda Raaskambooni ay iyaguna Weerarkaasi ka qaadeen Hurdo iyo damaashaad.
Ugu dambeyntii, Saraakiisha Ciiddamadda Jubbaland dhinaca Axmed Madoobe, ayaa beeniyay in weerarkaasi uu ahaa mid ka imaaday dhankooda, balse waxa ay sheegeen inay u badinaayan in laga soo qaaday dhanka Kooxda Al shabaab oo ka faa iidaysanaya khilaafka ay dawladu horsed ka tahay.
La soco wixii kusoo kordha wararkeena dambe.